Esory Any Ry Marvel Sy DC, Rankizy: Vao Nividy Tantara An-tsary Fitiavan-Tanindrazana Mampihomehy Iray Ho Anareo i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2016 5:45 GMT
Ady iray hahàna ny fo sy fanahin'ireo tanora mpanjifa tantara an-tsary mampihomehy ao Rosia. Sary nataon'i Kevin Rothrock
Timur Amirkhanov, tanora iray monina ao Siberia, no nibata tamim-pireharehana ny fanampiana vaovao iray mitentina 200.000 robla ($3.100) avy amin'ny Rosmolodezh, sampan-draharahan'ny governemanta federaly Rosiana misahana ny raharahan'ny tanora. Nandray anjara tamin'ny fihaonambe mikasika ny fanabeazana “Terra Scientia,” i Amirkhanov, izay nampalaza be ny sosokeviny hamoronana tantara an-tsary iray miresaka “fitiavan-tanindrazana”.
Araka ny voalazan'ny pejy Vkontakte-n'i Amirkhanov, ny tantara antsary, nitondra ny lohateny hoe “Time of Heroes” (Vanimpotoanan'ireo MAhery Fo) dia ampahany iray tamin'ny tetikasa hafa antsoina hoe “Honorable Choice” (Safidy Be Voninahitra) – klioba “fanatanjahantena ara-miaramila” ho an'ireo ankizy izay mampifanandrina ireo andiana tanora ho ao anatin'ireo fifaninanana fitsapàna ny “fahaizamanao”, ny fahalalàna momba ireo hery fiarovana, sy ny fepetra ara-batana amin'ny ankapobeny. Hahazo fitsangatsanganana maimaimpoana mankany amin'ny toeram-pamaharan'ny tafika an-dranomasina Rosiana ao Krimea izay mpandresy amin'ny fifaninanana amin'ity andiany ity.
“Ohatra voalohany” iray amin'ireo mahery fon'ilay tantara an-tsary vaovao nahazo fanohanana ao Rosia. Sary: Vkontakte
Lazain'i Amirkhanov, izay nahazo maripahaizana momba ny mekanika sy ny teknolojia avy amin'ny Akademiam-panjakana Misahana ny Fambolena,Tver, tamin'ny taona lasa teo, , fa ilay tantara an-tsary dia maneho “fironana vaovao iray ara-kolontsaina ao anatin'ny fampiroboroboana ny fanabeazana ara-tafika sy ny fitiavan-tanindrazana ao Rosia”. Teo amin'ny Vkontakte, nanoratra izy fa hahafahan'io tantara an-tsary io “hiresaka amin'ireo ankizy amin'ny fiteniny ilay tetikasa, ary koa hampita amin'izy ireo tsara ireo vaovao manandanja sy ilaina”. Mitanisa “ireo fotokevitra telo lehibe” ihany koa i Amirkhanov ho an'ny “Time of Heroes”: famoronana ireo safidy hasolo an'ireo mahery fon'ny vahiny, fampitomboana ny fisarihana ireo tanora mba ho lasa mavitrika amin'ny fanatanjahantena, ary hampiakatra ambony ireo fahalalana mikasika ny raharaha miaramila.
Tsy mbola misy vakiraoka azo raisina mihintsy mikasika izay andrasana amin'ny “Time of Heroes,” saingy efa namoaka sary sivy i Amirkhanov izay soritany ho toy ny “ohatra voalohany” amin'ireo mahery fo asongadina ao amin'ny vokatra farany. Ahitana sarinà lehilahy enina matotra, goavana manondronondro faritra samihafa amin'ny basiny, sy sarinà vehivavy tsaratarehy telo maka sary mambabo miaraka amin'ireo basy.
Olona efatra amby valopolo no nanoratra tamin'ny pejin'i Amirkhanov hilaza fa, te-hahazo dika iray amin'ilay tantara an-tsary mampihomehy izy ireo, rehefa mivoaka ilay izy.